मध्यपश्चिममा पर्यटनको संभावना प्रचुरमात्रामा छ : ब्यबसायी आचार्य – Tourism News Portal of Nepal
मध्यपश्चिममा पर्यटनको संभावना प्रचुरमात्रामा छ : ब्यबसायी आचार्य
मध्यपश्चिम नेपालको पर्यटकीय सम्भावना भएर पनी ओझेलमा परेको क्षेत्र हो । मध्यपश्चिमा नेपालको सबैभन्दा ठुलो ताल रारा ताल , गहिरो ताल फोकसुण्डो ताल, हिन्दुहरुको पवित्र तिर्थ स्थल मानसरोबर जाने प्रवेशद्धार हुम्ला लगाएतका विविध पर्यटकीय स्थल भएको क्षेत्र हो । तर पनी यस्को उचित प्रचार प्रसारका साथै राज्यले पनी ध्यान दिन सकेको छैन । विगत १२ वर्ष देखी सुर्खेतको पर्यटन क्षेत्रमा लागेका पर्यटन व्यवसायी तथा लेकाली टुर एण्ड ट्राभल्सका प्रबन्ध निर्देशक धर्मराज आचार्यसंग घुमफिरले गरेको कुराकानी मध्यपश्चिम पर्यटन विकास किन सोचे अनुसार हुन सकेन अहिले सम्म ?
पर्यटकिय संभानवा प्रचुरमात्रामा हुदा हुदै पनी यस क्षेत्रको विकास हुन न सक्नुका विविध कारणहरु छन् । सामान्य अर्थमा भन्नुपर्दा होटल क्षेत्रमा लागेका व्यत्तिहरु व्यवसायीहरुले आफ्नोमात्र विकास होस भन्ने चाहने,यातायात क्षेत्रमा लागेहरुका पनी त्यस्तै सोच रहेको र प्राय सबै आफ्नो स्वार्थमा रहेको देखिन्छ, सायद यसैले होला सोचे अनुरुप सुर्खेत लगाएत मध्यपश्मिमा रहेका पर्यटकिय संभावना हुदाहुदै पनी यहाको विकासहुन नसकेको हो ।
यस्का लागी के गर्नु पछी ज्स्तो लाग्छ ?
यहाको व्यापारी व्यवसायीहरुको सोचमा परिर्वतन ल्याउन जरुरीछ । यस्का साथै आफ्नो मात्र नभएर सामुहीक भावना जगाउन जरुरी रहेको छ ।
आफ्नो क्षेत्रमा रहेको पर्यटकिय क्षेत्रको विकासका लागी तपाईहरुले के गर्नु भएको छ त ?
पर्यटनको अथाह संभावना हुदा हुदै पनी अन्तबाट केहि पनी नभएको हुदा हामी केही युवाहरुको संक्रियतामा प्रचार प्रसारको थालनी गरेका छौ । मध्यपश्चिमका प्राय सबै क्षेत्रमा रहेका पर्यटकिय क्षेत्रहरुको फोटो प्रर्दशी ,पंप्लेट ,डकुमेन्ट्र,नक्शा आदि बनाएर गाँउ गाँउको होटलहरुमा पोस्टर बनाएर टास्ने प्रचास प्रसार गर्ने , यहाँको प्राथमीकताका बस्तुहरुको प्रचारप्रसारमा जुटेका छौ ताकी कम्तीमापनी यहा आउने पर्यटकहरुको ध्यान तान्न सकोस ।
पछिल्लो समय मध्यपश्चिम क्षेत्रको पर्यटनको अवश्था कस्तो पाउनु भएको छ ?
मध्यपश्चिममा पर्यटनको संभावना प्रचुरमात्रामा रहेको छ । संभावना हुदाहुदै पनि यो क्षेत्र पछि पर्नुका प्रमुख कारण यहाँ युनिटीको अभाव छ । पर्यटनक्षेत्रमा लागेका व्यवसायीहरु बीचनै एकताको अभाव देखेको छु भैले । सुधुरपश्चिममा हाम्रो भन्दा कमै पर्यटनक्षेत्र भएपनी उनीहरुमा एकता छ , प्रचार प्रसार गर्ने एकजुट भएर लागेका छन र त्यहाको अवश्था अहिले धेरै राम्रो भएको छ ।
विशेष गरेर भारतीय पर्यटकहरुको सख्या दिनानुदिन बड्दो छ । यही कुरालाई मध्य नगर गरेरका भारतीय धार्मीक पर्यटलाई भित्राउन सकियो भने राम्रो हुन्छ । यस्का लागी सबै एक जुट हुन जरुरी रहकोे छ । हाम्रोमा विश्वकै आर्कषण राराताल छ, दोस्रो लुम्बिनीको नामले चिनिने काँक्रेविहार ,दैलेखको विभिन्न स्थानमा ज्वालाहरु लगाएत विविधता छ । यस्ता धेरै संभावना हुदाहुदै पनी एकता छैन । सवै व्यवसायीले आफ्नो व्यवसाय मात्र हेरे उनीहरुले सोचेनन् कि जिल्लाकै विकास भएमा सम्पूण क्षेत्रकै विकास हुन्छ ,व्यापार व्यवसाय फस्टाउछ भनेर ।
अर्को कुरा यहाँका मानीसहरुले पनी आफ्नै क्षेत्र घुम्न गएका छैनन् । पहिला त आफ्नै क्षेत्रको भ्रमण गर्नु प¥यो नी ,त्यो नी छैन् । पर्यटनक्षेत्रमा लागेकाहरुलाई समेटेर अघि बड्न पनी न सकिएको हो र व्यवसायीहरुले आफ्नो क्षेत्रबाट दिन सक्ने योगदान पनी दिएनन् व्यवसायीले ।
अब के गर्नु पर्ला ,मध्यपश्चिमका पर्यटकिय क्षेत्रलाई पनी अन्य क्षेत्र संगसंगै अघि बडाउन् ?
सर्वप्रथम त मध्यपश्चिम आउने पर्यटकहरुलाई यातायातको सहजताहुन जरुरी छ । केहि समय चलेर पुनःबन्द भएको हवाई सेवालाई सुचारु गरिनु पर्छ । पहिला काठमान्डौ बाट सिधा उडान हुन्थ्यो त्यती बेला चहलपहल पनी बडेको थियो भने सडक यातायातलाई अझ बडी सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाउन जरुरी छ । यसका साथै विभिन्न प्याकेजहरु बनाएर यहाको प्रचार प्रसार गर्न जरुरी छ भने सरकारले पनी कम्तीमा सरकारी कर्मचारीहरुलाई प्याकेज बनाएर मध्यपश्चिम घुम्ने योजना बनाएमा थप प्रचार प्रसार हुनेथियो ।
यहा आउने आन्तरीक र बाह्य पर्यटकको आवागमनमा बृद्धि हुन्थ्यो । अहिले त पहिलेको भन्दा पर्यटकहरुलाई खाने बस्ने ठाउहरु धेरै राम्रो भएर गएको छ र प्रचार प्रसार गरिनु पर्छ जस्तो लागेको छ । प्राइभेटह कम्पनी तथा होटलहरुले त गरिरहेकै अवश्था छ तर सरकारले पनी केहि गरिदिए राम्रो हुने थियो ।
सुर्खेत विमानस्थललाई पुनः संचालनमा ल्याउन व्यवसायीहरुले किन पहल गरेनन् त ?
हैन, व्यवसायीहरुको तर्फबाट पहलै न भएको त होईन ,केहि पहल त गरेका हौ तर यो विमानस्थलको धावनमार्गको लम्बाई नपुगेको कुरा आईरहेको छ । यसस्कालागी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने देखिएको छ । सरकारले जग्गाको मुआब्जाको व्यवस्था गरेर धावनमार्गको लम्बाई बडाएर विमानस्थल पुनःसुचारु गर्न तर्फ ध्यान दिनु जरुरी छ ।
तपाईको क्षेत्रमा आउने पर्यटकहरुको गुनासो त यात्रा र खाने बस्ने व्यवस्था राम्रो न भएको र महंगो गएको गुनासो पनी छ नी ?
पक्कै पनी पहिला त्यस्तो थियो होला तर अहिले त्यस्तो छैन । बस्न र खानाकालागी निकै राम्रा राम्रा होटलहरु खुलीसकेको अवश्था छ। अहिले मानसरोबरको प्याकेजमा पनी सहुलीयत छ ,लगभग ४हजार जती पर्यटकहरु मानसरोवरको यात्रामा हुनुहुन्छ ।
केहि गुनासो छ, तपाईहरुको ?
यो क्षेत्रमा रहेका जतीपनी सडकहरु छन तीनीहरुको स्तरवृद्धि हुनपर्छ । मुगुको राराताल जाने बाटो खोलेर मात्र पुग्दैन । यो बाटोको स्तरवृद्धि गरिन जरुरी छ । साघुरो भएको ठाउँमा बढाउने र कालोपत्रे गर्ने तर्फ सरकारले प्राथमीकतामा राखेर समयमा ध्यान दिओस जस्तो लाग्छ । यहाँ आउने पर्यटकहरुको सुरक्षालाई लिएर कुनै निती ल्यावोस भन्ने हो । राम्रो ठाँउमा मानिस आउने वातावणमा सरकारले ध्यान दिएको खण्डमा आम्दानीपनी त सरकारलाई हुन्छ नी , त्यसमा ध्यान दिवोस ।